शुभाकर खड्का जसले आफु माथि भएको दु’र्ब्य’ब’हा’र स’हेनन र अमेरिकी मिडियामा छायो नेपाल !
Homeबिबिधशुभाकर खड्का जसले आफु माथि भएको दु’र्ब्य’ब’हा’र स’हेनन र अमेरिकी मिडियामा छायो नेपाल !
March 16, 2021 Desk 1 बिबिध
क्यालिफोर्निया- अमेरिकाको पश्चिमतटीय राज्य क्यालिफोर्नियाको सानफ्रान्सिस्कोमा नेपाली उबरचालक सुभाकर खड्कामाथि दु’र्ब्य’ब’हा’र गर्ने बु’ल्ली अ’र्ना कि’माईले स्थानीय प्रहरीसमक्ष आ’त्म’स’मर्पण गरेकी छिन्। उनले आइतबार राती आ’त्म’स’र्मण गरेकी हुन्।
उनलाई आ’क्र’म’ण तथा हा’तपा’त, ड’कैती, ष’ड्य’न्त्र र स्वास्थ्य तथा सु’रक्षा नि’यमको उ’ल्लंघन गरेको अ’भियोगमा प्रहरी हि’रा’स’त’मा राखेर मु’द्दा अगाडि बढाइएको छ। अ’प’रा’धि’क पृष्ठभूमी भएकी २४ वर्षीया कि’माइ इ’रानी मू’लकी अमेरिकी ना’गरिक हुन्।
आफ्ना दुई साथीसँग उ’बर च’ढेकी उनले उ’बरचा’लक खड्कालाई ल’छा’प’छा’र पा’र्ने, उनको मोबाइल फोन लु’ट्’ने र उनीमाथि खो’क्नेजस्ता ह’र्कत गरेकी थिइन्। मा’स्क नलगाइ उ’बर च’ढेकी उनलाई उबरको का’नुनअनुसार मास्क लगाएपछि मात्र ग’न्तव्यमा लै’जाने भनेपछि त्यसको अ’वज्ञा गर्दै उनी त्यो ह’दको ह’र्कतमा उ’त्रिएकी थिइन्।
यसअघि नै यो ह’र्कते काण्डमा कि’माईलाई साथ दिने अर्की महिला मलेसिया किङ बिहिबार नै पक्राउ परेकी थिइन्। अ’प’रा’धि’क पृष्ठभूमिकी यी महिलालाई आ’क्र’म’ण गरेको, अरुको सामान ज’ब’र्ज’स्ती खो’सेको र स्वास्थ्य तथा सु’रक्षा नि’य’म उ’ल्लंघ’न गरेको अ’भियोगमा प्रहरी हि’रा’स’त’मा राखिएको छ।
उबर चढेकी तेस्री महिला जो बुलिङमा सहभागी थिइनन्, उनलाई भने प्रहरीले कुनै का’रबा’ही गर्न आवश्यक ठा’नेको छैन। सुभाकरमाथि भएको यो दु’र्व्य’व’हा’र’को घटनाले अमेरिकी सामाजिक सञ्जाल मात्र हैन, मू’लधारका मिडियामा पनि महत्व पाएको छ।
यसलाई केही समययता अमेरिकामा ए’सियाली मु’लका मानिसमाथि भैरहेको दु’र्व्य’व’हा’र’का श्रृ’ङखलावद्ध घ’टनाको अर्को एक घ’टनाका रूपमा लिइएको छ। तर, रै’था’ने अमेरिकी भने यो ए’सियाली मू’लकै महिलाले गरेको ए’सियालीमू’लकै मानिसलाई गरेको दु’र्व्व’य’हा’रको घटना भएकाले यसलाई अमेरिकीले गरेको घटना भनेर चि’त्र’ण गर्नु अ’तिर’ञ्जित भएको बताउँछन्।
दक्षिणप’न्थी रेडियो प्रस्तोता मा’इक रि’ड भन्छन्, ‘यो ए’सियालीहरूको क’कफा’इट हो, अमेरिकामा आएर उनीहरूले क’कफा’इट गरे, उ’ल्टै अ’ल्पसंख्य’कमाथिको दु’र्व्य’व’हा’र भनेर अमेरिकीकै हु’र्म’त लिए।‘ यसैबीच उ’बरचालक खड्काका लागि क्या’लिफफोर्नियाकी लगानीकर्ता र व्य’वसायी सा’यन बे’निस्टर वि’धाता भएर देखापरेकी छिन्।
उनले सुरु गरेको फण्डरेजमा ९८ हजार डलरभन्दा धेरै रकम संकलन भइसकेको छ। त्यसमा बेनिस्टरले २० हजार डलर आफ्ना तर्फबाट म्याच गर्ने घो’षणा गरेकीले खड्काका लागि एकलाख १८ हजार डलरभन्दा बढी रकम संकलन भैसकेको छ। यो घटना अत्यन्त नि’न्द’नी’य छ र यसको जति नै भ’त्सर्ना गर्दा पनि कमै हुन्छ।
तर, यो पनि सत्य हो कि उ’बरमा यस्ता प्रकृतिका घ’टना सामान्य नै मानिन्छन् । हो यो सीमाभन्दा बाहिर नै हो। यस्ता घटनामा सामान्यत: उ’बरले उबरचालकलाई दो’षी देखाएर उनीहरूको अ’काउन्ट नै ब’न्द गरिदिने गरेको छ। तर, शुभाकर भा’ग्यमानी ठहरिए।
उनीमाथि घटेको यो घटनाले उ’बरचालकमाथि भैरहेको अ’त्या’चा’र’को पर्दाफास भयो र आइन्दा उनीहरूमाथि ग्राहक र कम्पनी दुबै तर्फबाट हुँदैआएका ज्या’द’ति’का बारेमा फ’रकखाले सं’कथन लेख्ने प्र’तिनिधि घ’टना बन्यो। हो, पछिल्लो समय अमेरिकामा खासगरी ए’सियाली मु’लका मानिसमाथि रं’गभे’दी व्य’वहार भैरहेको छ।
तर, यो प्रतिनिधि घ’टनामा इ’रानी मू’लकी बु’ल्ली सं’लग्न भएकीले यस घटनालाई त्यो रूपमा चि’त्रण गर्नुचाँहि त्यति बु’द्धिमानी ठहरिदैन। तर, यसो भनेर यो घटनालाई अर्कै टापूको घ’टनाका रूपमा लिनु पनि हुदैन। यसलाई ए’सियाली मु’लका मानिसमाथि हुँदै आएको रं’गभे’दी दु’र्व्य’व’हा’र’कै ‘बा’इ प्र’डक्ट’का रूपमा भने लिन सकिन्छ।
जे होस्, शुभाकरका कारण नेपाल अमेरिकाको सामाजिक सञ्जालमा मात्र हैन, मूलधारको मिडियामा पनि चर्चामा छ। समाचारका लागि चाहिने न्युनतम आधार फा’इ’ब डब्लु र वन ए’चको खोजीमा शुभाकर र उनको मू’लथलो नेपाल सन्दर्भवश आएको छ। यसले नेपाल र नेपालीको छ’विलाई सकारात्मक रूपमै प्रस्तुत गरेको छ। बीएल नेपाली सेवा
चैत्र ३ गते मंगलबारको राशिफल